न हिउँद, न वर्षामा सुरक्षित छ मनाङको सडक | Gundruk Khabar
मनाङ,११ असार । हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङका बासिन्दालाई नेपालको राजधानी र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पुग्न धेरै कठिन छ । जिल्लाबाहिर आवतजावत र सामग्री ढुवानी गर्ने मनाङवासीको यही एउटै सडक न हिउँदमा र नत वर्षायाममा नै सुरक्षित र सहज छ।
हिउँद याममा हिउँ पर्ने भएकोले विकासका काम गर्न सकिँदैन भने वर्षामा पहिरोका कारण सडक निर्माण या अरु कुनै निर्माणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था हुदैन। मनाङवासी वर्षायाममा यो बाटो हिँड्दा कतिबेला कहाँबाट पहिरो आएर पुर्ने हो भन्ने त्रासले पहरोतिर हेर्दै भगवान पुकारेर यात्रा गर्न विवस छन् । सधैँ यस्तै जोखिममा यात्रा गरिरहेका उनीहरुलाई त बानी परिसकेको छ तर यहाँ जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भने सास्ती नै हुने गरेको छ ।
यहाँका बासिन्दा सधैँ सडक सहज बन्ने आशामा हुन्छन् तर वर्षेनी यो आशा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । यो वर्ष सडक सञ्जाल विस्तार हुन्छ अनि सहज यात्रा गरौंला भनेर बसेका उनीहरु सडक नबन्दा जोखिममै यात्रा गर्न बाध्य छन्। हिउँदमा हिउँ परेर माटो भेट्न समेत सकिदैन र काम गर्न मुस्किल भएको भन्छन् निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनी । यता वर्षा लाग्नासाथ पहिरोको जोखिम बढ्छ।
मनाङबाट अर्को जिल्लासम्म पुग्न पनि यही एउटै सडक छ तर लामो समयसम्म पनि यो सहज हुन सकेको छैन । यसकारण पनि मनाङवासीले आफूहरुलाई सधैँ छुट्टै देशको जस्तो व्यवहार भएको जस्तो लाग्ने गरेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्।
बेँसीशहर– चामे ६५ किलोमिटर सडकमध्ये लमजुङतर्फ ३५ र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर पर्दछ । मनाङबासीको जिल्लाबाहिर निस्किने एकमात्र निकास यही हो । तर यो बाटोमा बाह्रैमास असुरक्षाको घण्टी बजिरहेको हुन्छ । कोही व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेमा मनाङवासी उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थाका लागि पनि पहिरोले समस्या पार्ने गरेको छ ।
अहिले त झन् कोभिड १९ को सङ्क्रमण फैलिइरहेकोले यहाँका बासिन्दा थप तर्सिएका छन्। मनाङमा पनि सङ्क्रमण देखिई सकेकाले स्वाब नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि गण्डकी प्रदेशस्थित प्रयोगशाला पठाउन बाटोका कारण कठिन छ । यस्तो महामारी र वर्षाको समयमा त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज अधिकारीले बताए।
‘सरकारले मनाङवासीलाई सहज सडकको पहुँचमा पु¥याउने हो भने छुट्टै देश हो जस्तो लाग्ने थिएन’ उनीहरु भन्छन्– ‘हामीलाई सरकारले पनि जोड्न चाहेन जस्तो लाग्छ ।’ पूर्खाहरुको त हिँडेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिलेको युगमा पनि त्यसैगरी यात्रा गर्न बाध्य भएकोमा उनीहरुको दुःखेसो छ ।
‘वर्षा सुरु हुनासाथ माथिबाट पहिरो खस्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा मनाङवासील रोग फैलिँदा समेत स्वाब पु¥याउन नसकिने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । त्यसै त स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट ढिला गरी आउने गरेको छ त्यसैमा पनि वर्षात्को समयमा यस्तै समस्याले झन् सताउँछ’ प्रजिअ पौडेलले भने– ‘अहिले पहिरो हटाएर सडक सुचारु भएपनि कतिबेला फेरि पहिरो झर्छ भन्ने त्रासले सताउँछ, पहिरोले खसिराख्ने हो भने त मनाङवासीको कोरोना परीक्षण मात्रै नभई सङ्क्रमण फैलियो भने पनि स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन नसकिने हो भन्ने मनमा डर बढेको छ।’
नासोँ गाउँपालिका–१ तालका स्थानीय राजु गुरुङले हिउँदमा हिमपात, गर्मीमा वर्षाले पहिरो खस्ने गरेकोले बिरामी परेर उपचारमा जान समेत समस्या हुने गरेको बताए । ‘सबै खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा अरु जिल्लाबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, पक्की सडक नभएकोले कहिले बाढी पहिरो त कहिले हिमपातले गर्दा सधैँ समस्या आउँछ’ गुरुङ भन्छन्।
निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर थप गर्दा समेत सडक सञ्जाललाई जोड्ने पुलको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । मनाङका पाँचवटा पुलले जोडेको छ । तर अहिलेसम्म एउटा बाहेक अन्य पुल निर्माणको प्रक्रियामा समेत पुग्न सकेको छैन । ‘‘कतिबेला काठको पुल गलेर दुर्घटना हुने हो भन्ने यकिन समेत गर्न सकिँदैन, हिउँदमा हिमपात र वर्षामा बाढी पहिरोले गर्दा ढुवानीका सामग्री बीचैमा हुन्छन्’ स्थानीय अरुण गुरुङ भन्छन् ।
पाँचवटा पुल निर्माणका लागि मात्रै रु।२२ करोड बजेट विनियोजन गरेको क्याराभान कन्सल्टेन्सीका सब इन्जिनियर कृष्ण महतले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म एउटा पुल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । मनाङमा हिउदमा हिमपात र वर्षायाममा बाढी पहिरोले सामग्री ढुवानी पनि गर्न सक्ने अवस्था नहुने महतले बताए ।
सडक सञ्जालको विस्तार राम्रो नहुँदा आवश्यक परेका सामग्री समेत ल्याउन मुस्किल परेको छ । होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खाद्यान्न बाहेक प्रायः बाह्य पर्यटकले मन पराउने वस्तुहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि सडकले सहज नभएको उनीहरुको भनाई छ । सडक सञ्जाल होटल व्यवसायीसँग बढी मात्रामा जोडिनुका साथै प्रभावित पनि उनीहरु नै छन् ।
सामान सकिनासाथ सहजै बजार पुगेर सामान ल्याउने वातावरण समेत नहुँदा सधैँ समस्यामा परेको होटल व्यवसायी विनोद गुरुङले बताए । ‘‘कुनै समयमा त सामान ल्याउदै गर्दा बाटोमै रोकिन्छ, कहीँ पुलको समस्या त कतै सुख्खा पहिरोको, मनाङवासी सधैं समस्यामै जिउन बाध्य छन्’ गुरुङले भने ।
पहिले हिँडेरै यात्रा गर्दा मनाङ ङिस्याङबाट लमजुङको सदरमुकाम बेंसीसहर पुग्न दुई दिन लाग्ने गर्दथ्यो । मनाङको चामे हुँदै तिमाङ, धारापानी, ताल, च्याम्चेमा बास बस्ने गरिन्थ्यो । च्याम्चे हुँदै जगत, घेर्मु, बाहुनडाँडा, खुदी निस्कने र बेँसीसहर पुग्ने गरिएको थियो । अहिले सडक बनेपछि भने एकै दिनमा मनाङ पुग्नसक्ने भएपनि बाढी पहिरो, हिमपातले गर्दा सहज अवस्था भने छैन ।
स्थानीय ८२ वर्षीय याङ्डुङ गुरुङ भन्छन्- ‘हामीले चौँरी गोठमा बस्दै हिमाली भेग र लेकका जडीबुटीहरु सङ्कलन गर्ने गथ्र्यौ। यार्सा, निरमसी, वनलसुन, पाँचऔँले, जिम्बुलगायतका जडीबुटी सङ्कलन गरी जाडो बढ्न थालेपछि बेँसी झर्ने चलन थियो । लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, कास्की, काठमाडौँलगायतका ठाउँमा पुगेर यी जडिबुटीसँग चालम या अरु अन्न साटेर घर फर्किने गथ्र्यौँ।’
Previous articleपाटन अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका कारण एक जनाको मृत्यु पुष्टि
Next articleस्वास्थ्य सुरक्षामा लापरवाही गर्दै झापाली, १५ वटै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेकपा बैठक सकियाे, अर्काे बैठक बुधबार बस्ने
लिम्पियाधुरारहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ?
संसद पुनस्थापना मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुतर्क हो, कांग्रेस अदालतको निर्णय कुरेर बसेको छ :...
मौसम : बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना
छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात खोल्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय भाडा वृद्धि हुने
काठमाडाैँ, २५ असार । सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले छोटो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय...